दोर्दी खोलाको आईपीओको लक्की नम्बर ९ र १ ! ९ जनाले पाए ११ कित्ता « Artha Path
दोर्दी खोलाको आईपीओको लक्की नम्बर ९ र १ ! ९ जनाले पाए ११ कित्ता
काठमाडौं । दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ बुधबार बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलको आफ्नै कार्यालय नारायण नक्साल काठमाडौंमा बुधबार बिहान ९ बजे आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएको हो । १० कित्ताका लागि ९ नम्बर र ११ कित्ताका लागि १ नम्बर लक्की परेको छ ।
कम्पनीको आईपीओमा अन्तिम दिनसम्म १४ लाख ७१ हजार ६६५ जना आवेदकले १ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६३ लाख ९७ हजार ११० कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । जसमा विभिन्न कारणले ८८२ जनाको आवेदन रद्द भएको छ भने १४ लाख ७० हजार ७८३ जना आवेदकको मात्रै सदर भएको छ ।
कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले गोलाप्रथा विधिमार्फत १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गरिएको छ । कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्दा २ लाख १ हजार ९८३ जनाले कम्पनीको आईपीओ पाएका छन् । १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्दा ९ कित्ता बाँकी रहन्छन् । ९ जनाले भने बाँकी रहेको ९ कित्ताबाट एकएक कित्ता थप गरेर ११ कित्ताका दरले पाएका छन् ।
कम्पनीले जेठ २६ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्म प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका २१ लाख ९५ हजार ५०९ कित्ता साधारण शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको थियो । जसमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात ६५ हजार ८६५ कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ९ हजार ७७५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि र बाँकी २० लाख १९ हजार ८३९ कित्ता शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको थियो ।